Joornaatada bukaanka ku tijaabi shaqo cusub
Haddii aad heshid shaqo cusub oo noqon karta mid habboon waxaad la xiriireysaa shaqo bixiyaha iyo Qasnadda ceymiska. Waxaad markaas fursad u heli kartaa in aad qaadatid fasax shaqo si aad u tijaabisid shaqada cusub. Sidaas ayaad ku tijaabin kartaa shaqo cusub oo kugu habboon, duruufahaaguna ku hagaagi karaan. Waxaad qaadaneysaa joornaatadaada bukaanka, shaqadaadina fasax shaqo ayaad uga jirtaa sidaas darteed ma lumineysid badbaadadi shaqadaada. Haddii aad su’aalo qabtid waad nala soo xiriiri kartaa.